ဒီရာသီမှာ (၂)ကြိမ်တိုင် ဒုက္ခပေးထားတဲ့ ဘီလ်ဘာအိုကို ဘာစီတို့ နူးကမ့်မှာ ပြန်လည်ချေပနိုင်မလား? – MySport Myanmar
ဒီရာသီမှာ (၂)ကြိမ်တိုင် ဒုက္ခပေးထားတဲ့ ဘီလ်ဘာအိုကို ဘာစီတို့ နူးကမ့်မှာ ပြန်လည်ချေပနိုင်မလား?
ဘာစီလိုနာကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အတွင်းမှာ ဆီဗီလာအသင်းကို သရေကျခဲ့ပြီး ခြေချော်သွားခဲ့ရလို့ အမှတ်ပေးဇယားထိပ်ကနေ ရီးရဲလ်ကို နေရာဖယ်ပေးလိုက်ရတဲ့အတွက် လာလီဂါချန်ပီယံဆုတိုက်ပွဲက ပိုမိုပြင်ထန်လာတော့မှာဖြစ်သလို ဒီတစ်ပတ်မှာလည်း ဘာစီလိုနာက ပထမအကျော့မှာ သူတို့အသင်းကို အနိုင်ယူထားခဲ့တဲ့ ဘီလ်ဘာအိုအသင်းနဲ့ ပြန်လည်ရင်ဆိုင်ရဦးမှာဖြစ်လို့ အမှတ်ပြည့်ရယူနိုင်ဦးမလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
ဘာစီလိုနာက လာလီဂါပြန်လည်စတင်ချိန်မှာ မာယော့ကာ လီဟာနက်စ်တို့ကို ပေးဂိုးမဲ့နဲ့ ဆက်တိုက်အနိုင်ရခဲ့ပေမယ့် ဆီဗီလာနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ သူတို့ရဲ့ နိုင်ပွဲဆက်မှုက ရပ်တန့်သွားခဲ့ရသလို ရီးရဲလ်ကိုပါ နေရာဖယ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ် ပွဲစဉ်(၃၁)မှာ ရီးရဲလ်က မာယော့ကာနဲ့ ဆုံတွေ့နေလို့ နိုင်ပွဲဆက်နေမှာ သေချာနေသေးတာမို့ ဘာစီလိုနာအနေနဲ့ အမှားခံလို့ မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကွင်းလယ်ပိုင်းမှာ ဘူးစကတ်စ်နဲ့ ဒီဂျောင်တို့ ဒဏ်ရာနဲ့ပွဲပယ်အသီးသီးရနေတာက ဘာစီအတွက် အားနည်းချက်ဖြစ်နေရပါတယ်။
ဘီလ်ဘာအိုက လာလီဂါပြန်ကစားတဲ့နောက်ပိုင်း(၃)ပွဲမှာ လုံးဝကိုရှံးပွဲမရှိသေးပဲ အသက်လက်တီကိုအသင်းကိုတောင် သရေကစားထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘီလ်ဘာအိုရဲ့အဝေးကွင်းစွမ်းရည်က သိပ်အကောင်းကြီးမှာ ရှိမနေဘူးဆိုပေမယ့် အဝေးကွင်းကစားရပြီဆိုရင် အနိမ့်ဆုံး သရေတစ်မှတ်လောက်ရအောင် ခံကစားတတ်တာက ဘာစီလိုနာအတွက် အခက်တွေ့စေနိုင်သလို ဒီရာသီ လာလီဂါမှာရော ကိုပါဒယ်ရေးမှာပါ ဘာစီလိုနာကို (၂)ကြိမ်တိုင် အနိုင်ယူထားခဲ့တဲ့အသင်းလည်း ဖြစ်လို့နေပါတယ်။
ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ဒီဇင်ဘာလတုန်းက အယ်ဂလက်စီကိုဒါဘီပွဲအတွင်း ရီးရဲလ်နဲ့ ဂိုးမရှိသရေကျခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကတည်းက လာလီဂါအိမ်ကွင်းပွဲစဉ်တွေအားလုံးကို တောက်လျှောက်အနိုင်ရထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘာစီဟာ နူးကမ့်မှာ ဘီလ်ဘာအိုကို လက်ခံကစားရတဲ့ ပွဲတိုင်းလိုလိုမှာ ရှံးပွဲမရှိအောင် ကစားထားနိုင်သလို ပွဲအများစုမှာတော့ အနိုင်ရထားခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ ဘီလ်ဘာအိုက ဘာစိလိုနာကို အခက်တွေ့အောင် ကစားနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် အမှတ်လိုအပ်ချက်ကြောင့် ဘာစီတို့ မဖြစ်မနေ အနိုင်ကစားပါလိမ့်မယ်။ ဘာစီလိုနာတို့ ကပ်နိုင်ပါမယ်။
MySport Myanmar2020-06-23T15:22:33+06:30June 23rd, 2020|Football, La Liga|